ဂိမ်းဆော့နေတာ မပြီးသေးလို့ မင်္ဂလာပွဲကို မလာတဲ့ သတို့သမီးလောင်းကို ဂိမ်းဆိုင်ထဲကနေ ဆွဲထုတ်ခေါ်ဆောင်ရ | Buzzy
ဂိမ်းဆော့နေတာ မပြီးသေးလို့ မင်္ဂလာပွဲကို မလာတဲ့ သတို့သမီးလောင်းကို ဂိမ်းဆိုင်ထဲကနေ ဆွဲထုတ်ခေါ်ဆောင်ရ
တရုတ်နိုင်ငံက သတို့သမီးတစ်ဦးဟာ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပဖို့ သိပ်မလိုတော့တဲ့ အချိန်ထိ ဂိမ်းဆိုင်ထဲမှာ သတို့သမီးဝတ်စုံနဲ့ ဂိမ်းကစားနေခဲ့ပါတယ်။ သူမက နာမည်ကြီး အွန်လိုင်းဂိမ်းဖြစ်တဲ့ League of Legends ကိုဆော့နေတာပါ။
တရုတျနိုငျငံက သတို့သမီးတဈဦးဟာ မင်ျဂလာပှဲကငျြးပဖို့ သိပျမလိုတော့တဲ့ အခြိနျထိ ဂိမျးဆိုငျထဲမှာ သတို့သမီးဝတျစုံနဲ့ ဂိမျးကစားနခေဲ့ပါတယျ။ သူမက နာမညျကွီး အှနျလိုငျးဂိမျးဖွဈတဲ့ League of Legends ကိုဆော့နတောပါ။
မင်္ဂလာပွဲချိန်ရောက်လာပေမယ့် သူမကစားနေတဲ့ ဂိမ်းက မပြီးသေးတာမို့ မင်္ဂလာပွဲကို မသွားနိုင်သေးပဲ ဖြစ်နေတာပါ ။ အဲ့ဒီသတို့သားနဲ့ နှစ်ဖက်မိဘတွေက ဘယ်လိုမှ ဆက်သည်းမခံနိုင်တော့ပဲ ၊ သူမကို မင်္ဂလာပွဲသွားဖို့ ဖြောင်းဖြပေမယ့် သူမက ဂိမ်းကို ပြီးသည်ထိ ကစားမယ်လို့ တောင်းဆိုနေပါတယ်။ သတို့သားရဲ. မိခင်က ချော့မော့ခေါ်သလို ၊ သတို့သားဖခင်ကလည်း မင်းမိန်းမကို မင်းမနိုင်ဘူးလားကွ ဆိုပြီး မဆီမဆိုင် သတို့သားကို ဟိန်းဟောက်နေပါသေးတယ်။
မင်ျဂလာပှဲခြိနျရောကျလာပမေယျ့ သူမကစားနတေဲ့ ဂိမျးက မပွီးသေးတာမို့ မင်ျဂလာပှဲကို မသှားနိုငျသေးပဲ ဖွဈနတောပါ ။ အဲ့ဒီသတို့သားနဲ့ နှဈဖကျမိဘတှကေ ဘယျလိုမှ ဆကျသညျးမခံနိုငျတော့ပဲ ၊ သူမကို မင်ျဂလာပှဲသှားဖို့ ဖွောငျးဖွပမေယျ့ သူမက ဂိမျးကို ပွီးသညျထိ ကစားမယျလို့ တောငျးဆိုနပေါတယျ။ သတို့သားရဲ. မိခငျက ခြော့မော့ချေါသလို ၊ သတို့သားဖခငျကလညျး မငျးမိနျးမကို မငျးမနိုငျဘူးလားကှ ဆိုပွီး မဆီမဆိုငျ သတို့သားကို ဟိနျးဟောကျနပေါသေးတယျ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ဘယ်လိုမှ ဂိမ်းဆက်ကစားဖို့ ခွင့်မပြုနိုင်တော့တာကြောင့် လူအုပ်ကြီးဟာ သတို့သမီးကို ဂိမ်းဆိုင်ထဲကနေ မင်္ဂလာပွဲ အခမ်းအနားဆီကို ဆွဲထုတ်သွားခဲ့ကြရပါတယ်။ သတို့သမီးကတော့ အော်ဟစ်ဆဲဆိုရင်း ပါသွားရှာပါတယ်။ တစ်သက်လုံး အမှတ်ရနေကြမယ့် မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုပါပဲ။
နောကျဆုံးမှာတော့ ဘယျလိုမှ ဂိမျးဆကျကစားဖို့ ခှငျ့မပွုနိုငျတော့တာကွောငျ့ လူအုပျကွီးဟာ သတို့သမီးကို ဂိမျးဆိုငျထဲကနေ မင်ျဂလာပှဲ အခမျးအနားဆီကို ဆှဲထုတျသှားခဲ့ကွရပါတယျ။ သတို့သမီးကတော့ အျောဟဈဆဲဆိုရငျး ပါသှားရှာပါတယျ။ တဈသကျလုံး အမှတျရနကွေမယျ့ မင်ျဂလာပှဲတဈခုပါပဲ။